Howlgal ay sameeyeen Ciidanka Booliska ayaa lagu soo qabtay burcad dadka ku dhacda Mogadishu… – Hagaag.com
Howlgal ay sameeyeen Ciidanka Booliska ayaa lagu soo qabtay burcad dadka ku dhacda Mogadishu…
Ciidamada Booliiska Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho kusoo qabtay burcad inta badan dhac u geysan jirtay dadka shacabka ah gaar ahaan dhalinyarada mooto bajaajta ku shaqeysata.
War kasoo baxay Ciidanka Booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gacanta kusoo dhigeen koox burcad ah oo dhac u geysatay mooto bajaaj kadib markii ruuxii laga dhacay mootada booliiska ku war galiyay falkaasi.
“Mooto nooceedu yahay bajaaj gaduud ah oo lahayo numberkeeda iyo taarikadeeda ayaa Muwaadin Soomaaliyeed looga dhacay Degmada Dharkeynley ee Gobolka Banaadir.” Muwaadinka dhibanaha ahaa ayaa ashtako u gudbistay Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, Ciidanka ayaana gacanta ku dhigay mootadii iyo burcadii dhacday.” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Booliiska.
Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay dhaca kooxaha hubeysan u geystaan moota bajaajta, burcada dhaca geysata ayaana mararka qaar dil u geysata dhalinyarada mootada laga dhacayo.